Stanolone (DHT) poda (521-18-6) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Uyerostanolone inokonzerwa nemakemikari kune DHT. DHT inonyanya kuumbwa mu testes, hair follicles, adrenal glands uye prostate gland uye inobudiswa apo testosterone inobatanidza ne enzyme mumuviri. Muchizvaro, DHT inokurudzira kukura kwehukama hunhu hwemurume embryo uye fetus.
Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6) video
Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6) Tsanangudzo
Raw Stanolone (DHT) powder (INN: androstanolone) inonzi biologically inobata metabolite yehomoni testosterone, yakatanga kunyanya mu prostate gland, testes, hair follicles, uye adrenal glands ne enzyme 5-alpha-reductase nenzira yekuderedza alpha 4, 5 double-bond. Dihydrotestosterone ndeyekirasi yemakemikari anonzi androgens, anowanzonzi androgenic hormones kana steroids, iyo inogumira uye androgen sex steroid uye hormone. Iyo igonist ye androgen receptor (AR). Inonyanya kukoshesa maitiro ekuita zvepabonde mukusiyanisa zvepabonde, kusvibiswa kwepenis uye shrotum, vhudzi, kubudisa sebum uye kukura nekuchengetedza prostate gland uye seminal vesicles. Iyo inonyanya kushandiswa mukurapa kwehutano hwemurume, uyerogen kukwana kwechirwere chakakomba, uyerogen kukwana kwekwegura uye microphallus mucheche.
Product Name Raw Stanolone (DHT) powder
Kemikari Name 5α-androstan-17β-ol-3-one solution,(5-alpha,17-
muchiso Name Dihydrotestosterone, DHT
Kirasi yeMishonga Steroids; Intermediates & Fine Chemicals; Pharmaceuticals; Steroid uye Hormone; API
Molecular Wsere 290.44
Kunyorera Point 178-183 ° C
Kubikira Point 372.52 ° C (yakawandisa kuongororwa)
Biological Half-Life 8-9 maawa
Skukodzera Mvura, 525 mg / mL (pa 25 ° C)
Stanolone APane Rinoshandiswa pakurwara kwechirwere chisingaperi, osteoporosis, utachiona hwakanyanya uye kushungurudzika, kupisa, nezvimwe zvakakonzerwa nehutano husina kunaka hwekurojeni, kukurudzira kukura kwevana vasati vasvika uye vasati vafa, nezvimwewo. Kuparara hakusi nyore kuporesa, kuora mwoyo kwehupircholesterolemia uye postpartum kunogona kushandiswa zvakare . Uye Raw Stanolone powder ingashandiswa semishonga yemishonga.
Chii chinonzi Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6)?
Androstanolone, kana stanolone, inozivikanwawo se dihydrotestosterone (DHT) uye inotengeswa pasi pezita rinonzi Andractim pakati pevamwe, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga uye hormone inoshandiswa kunyanya mukurapa maitiro epasi e testosterone mumarume. Inoshandiswawo kubata kubata mazamu uye chirume chiduku mumurume. Inowanzopiwa segelisi yekushandiswa kweganda, asi inogona kushandiswa sa ester nekujaira mu musumbu.
Iyo Yakananga Stanolone (DHT) powder (521-18-6) mabasa
Inogadzirwa nezviito zve enzyme iyi 3-oxo-5-alpha-steroid-4-dehydrogenase. Dihydrotestosterone (DHT) inogadzirwa neA5 alpha kuderedza testosterone. Kusiyana ne testosterone, DHT haikwanisi kunongedzwa ku-estradiol nokuda kwechikonzero ichocho androstanolone inozivikanwa se pure androgenic steroid. Dihydrotestosterone (DHT) inoshandisa biologically inoshandiswa metabolite yehomoni testosterone, yakatanga kunyanya kubva ku prostate gland, testes, hair follicles, uye adrenal glands kubva kune receptor 5-alpha-reductase nenzira yekuderedza alpha, 5double-bond. Dihydrotestosterone inowanikwa nekikirasi chemakemikari anonzi androgens, anowanzonzi androgenic hormones kana testoids. DHT inofungidzirwa kuti inenge nguva ye30 yakawanda kudarika testosterone semugumisiro wehukama hwakawedzerwa kune androgen receptor.
Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6) Dosage
Stanolone inotengeswa pamusika wezvokudya zveimwe nyika mune 20 kana 50 mg / ml yemari. Vanhurume vanofanira kutora chinenge 200-400mg kwevhiki, uye majekiseni anodiwa kamwechete pavhiki.
Vakadzi vanogona kuedza nandrolones nekuda kwekunaka kwavo uye mafungiro akaderera uyerogenic. Kunyange zvakadaro, ivo vachiri zvimwe uye androgenic, saka hapana chinopfuura 50 mami pavhiki inorayirwa vakadzi, uye kana zviitiko zvinoshandiswa zvikaitika, kushandiswa kwemairabolin kunofanira kumira pakarepo.
Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6) Kushandisa
Androstanolone yakafanana nemuviri we dihydrotestosterone iyo, sezvatinoziva, inoumbwa nehutachiona hwekutendeuka kwe testosterone. Saka vamwe vanoshevedza Androstanolone chigadzirwa che dihydrotestosterone. Androstanolone ine zvakanyanya uye androgenic effect uye, nekuda kwekugadzirisa kwayo, haigoni kushandurwa kuva estrogen. Kwekutsanya kwekutsanya kwesimba uye musero mashoma Androstanolone haina zvishoma.
Androstanolone akashandiswa kuva mutambi wemakwikwi anokwikwidzana steroid sezvo yakabatsira kuwana musungo wakaoma kuburikidza nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu nekuwedzera huwandu hwe androgen usinganzwisisi. Vakatambi vakawanda vakashandisa Androstanolone panguva yekushanda kwekutsvaga doping zvakaitwa nemakwikwi sezvo chinhu ichi chinoramba chiri mumuviri kwechinguva chiduku uye testosterone / epitestosterone kukosha haisi kuchinja. Chimwe chimiro chakanaka ndechekuti injectable version haisi chechi inotyisa.
Tenga Stanolone (DHT) powder kubva kuBuasas.com
1 Kudzokorora nokuti Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6)
Chigadzirwa STANOLONE (DHT) chinobatsira zvikuru.